Montreal စားသောက်ဆိုင်များဖွင့်ပါနှစ်သစ်ကူးနေ့ဇန်နဝါရီလ 1, 2018
Montreal စားသောက်ဆိုင်များဖွင့်ပါနှစ်သစ်ကူးနေ့: ဇန်နဝါရီလ 1, 2018
Montreal စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်ထားရှာဖွေခြင်း နှစ်သစ်ကူးအကြို ? မဟုတ်ပြဿနာတစ်ခု။ ပွင့်လင်းနှစ်သစ်ကူးရဲ့နေ့ Montreal စားသောက်ဆိုင်ရှာဖွေခြင်း? အခြားပုံပြင်ပါပဲ။ အကြိုအတိတ်, နေ့ --downtown ရဲ့ Sofitel ရဲ့ Le Renoir နှင့်ဟောငျး Montreal ရဲ့စိန့်ဂျိမ်း '' XO မှတဆင့်ပွင့်လင်းတည်းခိုဟိုတယ်များအပေါ် Count နှစ်ဦးစလုံးအစိုင်အခဲတွေဟာ, High-end bets-- နှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသင်သွား Montreal စားသောက်ဆိုင်များနှင့်အရက်ဆိုင်များစာရင်းကို features တိတ်ဆိတ်တဲ့, post-ရက်နာနှစ်သစ်ကူးနေ့၌အတွက်ရှိနေဆဲဟုကိုချစ်ရန်။
အောက်ပါစားသောက်ဆိုင်ဇန်နဝါရီလ 1, 2018 ပွင့်လင်းကြသည်။
သည် L'Express ကို
တနင်္ဂနွေအဘို့မြို့နှင့်မွန်ထရီရယ်အားလုံးအကြောင်းပါသောအရာကိုမြည်းစမ်းဖို့လိုသလား? သည် L'Express ကိုငါ၏အဆွေမှဦးခေါင်း။ Montreal ထိပ်တန်း, ငါ TOP Parisian ဘစ်စထရိုမှတ်တိုင်ကိုဆိုလိုတာ 10 နံနက်ကနေကုန်းပြင်မြင့်ရပ်ကွက်အတွင်း2နံနက်ရန်, အားလုံးနှစ်သစ်ကူးနေ့ဖွင့်လှစ်သည်။
ကျော်ကြားမှုအားဖြင့်သာလျှင်အားလုံး poutine အိမ်များကိုရိုက်နှက်ဖို့ poutine အိမ်တော်ကို, La Banquise ကျော်ကြားမှုမှကွိဘက်ရဲ့အချက်အပြုတ်ပြောဆိုချက်ကိုမလျော့နည်း 31 ထက်မူကွဲ, 24 နာရီတစ်ရက်ပေးထားပါတယ်။ ယင်းကုန်းပြင်မြင့်ရပ်ကွက်အတွင်းတွင်, ခြေရာပျောက်အနေဖြင့် အကြှနျုပျ၏အကွိုကျဆုံးပြင်ပတွင်စီးစကိတ်ကွင်း ။ ဒါ့အပြင်ကိုကြည့်ပါ: Montreal ရဲ့အကောင်းဆုံး Poutine
Charcuterie ဒီဟောငျး Montreal စားကျက်မှာ standout ဖြစ်ပါတယ်။ ပွင့်လင်းနှစ်သစ်ကူးရဲ့နေ့ညနပေိုငျး
L ကို awrence
မိုင်အဆုံးပူပွဲချင်းပြီးလောရင့် 11 နာရီမှတဆင့်ညစာ 5:30 pm တွင်ဖွင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါ့အပြင်ကိုကြည့်ပါ: Montreal ရဲ့အကောင်းဆုံးမနက်လည်စာ
Montreal ထိပ်တန်းကင်တစ်ခုမှာရောနှောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းရရှိသွားတဲ့။ ယင်း၏ချို့ယွင်းချက် -yes နေသော်လည်းကြောင့် touristy ရဲ့ဟုတ်ကဲ့, ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခါတစ်ရံတက်တက်ကြွကြွစိတ်ပါဝင်စားဖြစ်ပါသည်, ကအားလုံးကိုအချိန်များတွင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရဲ့ pep- အပေါ်ရုံအနိမ့်, သင်စိတ်ထဲပေမယ် Gibbys မှာကျွန်မပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကလိုပဲ။ ဒါကငါသည်လက်ျာဟင်းလျာများမိန့်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအတူလုပ်ဖို့တစ်ခုခုရှိနိုငျတယျ။ အမည်မသိဆက်လက်တည်ရှိဖို့တောင်းတဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်သူန်ထမ်းအရ, filet mignon ဖြတ်သန်းဒါပေမယ့်မဟုတ်ရင်သူကသင်တစ်ဦးဥာဏ်အသားစားချင်သောသူ၏ပင့်လျှင် New York ကဖြတ်ရှောင်ရှားရန်အထူးဖော်ပြထားခြင်းနှင့်တကွ, အသားကင်ကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့အကြံပြုထားသည်။ သူကဖြတ်မရှိ Pun စေပါဘူးဆိုပါတယ်။ အကြှနျုပျ၏အရင်းအမြစ်အဖြစ်ဝေး Gibby ရဲ့ငါးမွို့၌ကိုအကောင်းဆုံးကြောင်းဆိုကြသည်အဖြစ်တတ်၏။ ညနေ5နာရီကနေ 11 နာရီအထိ, နှစ်သစ်ကူးနေ့တွင်ညနေပိုင်းတွင်ဖွင့်လှစ်
တစ်တွေကတော့ပိုပြီးရှာဖွေနေနှစ်သစ်ကူးဧဝကိုအပြီးနေ့ကိုခံစားရ? ဟောငျး Montreal ရဲ့Méchant Boeuf ကြိုးစားပါ။ ဝန်ဆောင်မှုနှေးကွေးစေနိုင်ပါတယ်ဒါပေမယ့်အစားအစာ, ဘာဂါ, ပေးပြီးသွားကျောက်တည်ခြင်း, အတောင်ပံများနှင့်ပင်လယ်စာဖလားနဲ့တူ Haute နှစ်သိမ့်, အမှတ်အပေါ်ယေဘုယျအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဘားကအစက်အပြောက်ဂိုးသွင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်စားပွဲ၌ထိုင်။
အိုငျးရစျဘီယာ? စစ်ဆေးပါ။ သစ်သားပြားများနှင့်စပျစ်သီးကိုဂင်းနစ်ပိုစတာ? စစ်ဆေးပါ။ နွေး-ချစ်စရာကောင်း-န်ထမ်း-let's-စေ-မိတ်ဆွေများကို-နှင့်အတူ-လူတိုင်း-မှာ-The-bar ကို-ပြီးနောက်-All-ရှိနေတတ်တယ်တစ်ခု-အိုငျးရစျအရက်ဆိုင်အရက်ဆိုင်? ကြှနျတေျာ့အတှေ့အကွုံအဘယ်သူမျှမတစ်ခါတစ်ရံ, ဟုတ်ကဲ့တခါတရံဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်နှစ်သစ်ကူးနေ့တွင်နေဆဲအစိုင်အခဲအရက်ဆိုင်လောင်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့မဟုတ်မည်သည့်နေ့ဖြစ်၏။ နံနက်3မှ 11:30 pm တွင်ကနေပွင့်လင်းမြို့လယ်နှင့်ကုန်းပြင်မြင့်နေရာများ
ငါ့အကြိုက်ဆုံးဟောငျး Montreal သရဲခြောက်သောတစ်ခုမှာ။ သင်ကောလာဟလကိုယုံကြည်လျှင်, သရဲခြောက်သည်။ high-end ဆင်း-to-မွကွေီးပျေါမှာတစ်ချိန်တည်းမှာ။
နှစ်သစ်ကူးရဲ့နေ့ညစာကာလအတွင်းအချို့သောတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ, jazz မှားမသွားနိုင်ပါ။ သိုးသငယ်ကိုကြည့်ပါ။
Khyber Pass ကို
အာဖဂန်အစားအစာအိန္ဒိယနှင့်အလယျပိုငျး Eastern- အကြားတစ်ဦးလက်ဝါးကပ်တိုင်အဆိုပါပဲ့မှာ Khyber Pass ကိုအတူ Montreal တွင်ရေတိုထောက်ပံ့ရေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ် -think ။ မဆိုပေးထားနေ့၌တစ်ဦးကအစိုင်အခဲ, ချစ်စရာကောင်း, တတ်နိုင်လောင်း။ ဒါမှာပုလင်းကောက်ဖို့သတိရပါတစ် BYOW တည်ထောင်ဖွင့် သည့် SAQ အရက်များစတိုးဆိုင်များနှစ်သစ်ကူးနေ့ပိတ်ထားကြသည်ကတည်းကရှေ့တော်၌ထိုနေ့ရက်သည်။ ညနေ5နာရီကနေ 11 နာရီအထိ, နှစ်သစ်ကူးနေ့တွင်ညနေပိုင်းတွင်ဖွင့်ပါ
ယင်းကုန်းပြင်မြင့်၏တောင်ဘက်အစွန်းအပေါ်ပြင်သစ်ဘစ်စထရိုနှင့် Haute နှစ်သိမ့်အစားအစာပေါင်းစပ်မှုတော်ကိုထမ်းဆောင် nice ဒေသခံကျက်။ 5:30 pm တွင်နာရီမှ 11 နာရီအထိ, နှစ်သစ်ကူးနေ့တွင်ညနေပိုင်းတွင်ဖွင့်လှစ်
က Les3Brasseurs
အားကစားဘားလေထု (နေရာတိုင်းဆိုလိုသည်မှာပြားချပ်ချပ်ဖန်သားပြင်) နဲ့အရက်ဆိုင်အစားအစာ, ငါက Les3Brasseurs အစဉ်အဆက်အများဆုံးမယုံနိုင်စရာအရက်ဆိုင်ထမင်းစားခန်းအတွေ့အကြုံကိုဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အဆင်ပြေမယ့်မပြောနိုင်ပါဘူး။ မြို့တွင်းအပါအဝင်အားလုံး Montreal တည်နေရာ, 11:30 pm တွင်နေ2နံနက်ရန်, နှစ်သစ်ကူးနေ့ဖွင့်
သစ်ကိုယခုနှစ်ပထမနေ့ဖြစ်၏။ ဖွန်ဒူးနှင့်အတူနှုတ်ဆက်သည်။ ကြောင်းမည်သို့စုံလင်သည် ?! အနီးရှိကုန်းပြင်မြင့်တွင်တည်ရှိပြီး 10:30 pm အချိန်မှညနေ5နာရီကနေနှစ်သစ်ကူးရဲ့နေ့ညနပေိုငျးပွင့်လင်း Parc, La Fontaine ။
အပေါ် Montreal ရဲ့မိုင်အဆုံး၏အပေါ်ဂန္ထဝင်ဒဏ်ငွေပြင်သစ်အစားအစာ Laurier အနောက် puff pastries အတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင် escargots မှနွားငယ်သားပါးတင်ဒါမှ applesauce-ထိပ်ဆုံးအသွေးတော်ဝက်အူချောင်းကနေချစ်စရာကောင်းပွေီးမှအတူ။ နေချင်စဖွယ်ဆင်း-to-မြေကြီးတပြင်ဝန်ဆောင်မှု။ မနက်လည်စာနှင့်ညစာများအတွက်နှစ်သစ်ကူးနေ့ကိုဖွင့်။
ရှင်ဘုရင်၏အ Montreal အမဲသားကိုသောက်သည် ကိုပြောင်းလဲဘာသာရပ်ညနေ5နာရီအချိန်နာရီတိုငျအောငျမရရှိနိုင်ပူသောက်သည်အသားနှင့်အတူအားလုံးနှစ်သစ်ကူးနေ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဖွင့်သည်။ ယင်းကုန်းပြင်မြင့်ရပ်ကွက်အတွင်းခုနှစ်တွင်ပေါ်တွင် ပင်မ ။
Montreal ထိပ်တန်းထမင်းစားခန်းအတွေ့အကြုံများတစ်ခုမှာဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုဟာအနီး 10:30 pm အချိန်7နံနက်ကနေပွင့်လင်းမြို့လယ် Montreal ရဲ့ Maison Boulud နှင့်အတူနှစ်သစ်ကူးနေ့ရောက်လာပြီဖြစ်ပါသည် Fine Arts ၏ Montreal ပြတိုက် ။
အထက်ပါ Montreal စားသောက်ဆိုင်များနှင့်အရက်ဆိုင်များအပြင်အောက်ပါ Montreal စားသောက်ဆိုင်များ, နောက်ဆုံးအချိန်ကိုငါသူတို့ရဲ့အွန်လိုင်းကြိုတင်အချိန်ဇယားကို check လုပ်ထားကြသည် နှစ်သစ်ကူးနေ့ပွင့်လင်း :
Diablo BBQ Smokehouse Saloon
Bevo ဘား + ပီဇာဆိုင်ကို
Lola ရို Parc
ကာစီနိုက de Montreal
ရုံဘေးကင်းလုံခြုံစေခြင်းငှါ, ရွေးချယ်မှုများနှင့်နှစ်ဆစစ်ဆေးမှုများသင့်ရဲ့စားသောက်ဆိုင်ထွက်ဦးတည်မတိုင်မီခေါ်ဆိုပါ။ အချိန်ဇယားကိုပြောင်းလဲလူသိများခဲ့ကြသည်။
Montreal နာရီမျှော်စင်သဲသောင်ပြင် 2017 နေ့စွဲများနှင့်နှုန်း
Jean-Talon Market က
Fête du Croissant 2018: Montreal ရဲ့ Croissant ပွဲတော်
မွန်ထရီရယ်, မေလ 2018 ခုနှစ်ပွဲတော်များနှင့်အဖွဲ့
Montreal မီတာတက္ကစီ, တက္ကစီခနှင့်ပို
Montreal တခါတရံအငှားကားမောင်းကို Safe ဖြစ်ပါသလား
ကျောင်းသားခရီးသွားများလွန်း, မကြာခဏလက်ကမ်းကြော်ငြာ Be နိုင်သလား
မိုင် & အမှတ်
အဲဒီ Amazing အချက်အပြုတ် Tours မှတဆင့်ချီကာဂို Explore
သုံးသပ်ချက်: ဂျမေကာမှာရှိတဲ့က Round ဟေးလ် Spa
အိန္ဒိယတွင် 10 လူကြိုက်များသောစွန့်စားမှုခရီးသွားလှုပ်ရှားမှုများ
အမျိုးသမီးများ 2017 ဘို့ Swimsuit အမှတ်တံဆိပ်
လေးပျော်စရာ, မိသားစု-Friendly နေ့ Denver မှစ. Trips
လက်ဇန္ဒြီးယား, ဗာဂျီးနီးယား Oronoco ဂလားပင်လယ်အော်ပန်းခြံ
Coco Key ကို Omaha-
အိန္ဒိယ Hicks '' ဆိပ်ကမ်းကျွန်း: သူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခရီးသွားလမ်းညွှန်သူမရဲ့ဘဟားမားမှနေအိမ်